Uxolo nje sisi ! | sinolwimi
Uxolo nje sisi !
“Kulamathub’anqabe kangaka, kutheni ndisoyika kangaka, kaloku sisi kudala ndikuthanda yonke le minyaka”
Le yimigca yengoma ka Ohayv Ben Ysrael. Qho ndiyiva le ngoma ndiyavuseleleka emphefumlweni, kukho into eyenzayo kum ngaphathi. Ukhe uve xa umamele ingoma uzibone uxhumaxhuma okanye ungxola wedwa. Eyona nto indihlekisayo ke yinto yokuba ngamanye amaxesha abantu babona sendincuma estratweni okanye ndicula, bandijonge ngamehlo athethayo. Ubave abanye bemane besithi “yho! Iqala olwahlobo ke impambano” okanye bathi “jonga ke lo mculo wabo uyabaphambanisa”…
“ndithand’indlel’oziphethe ngayo, ndikubona qho xa udlula ngendlela. Undenza ndicinge kayi 2, ndimane ndizibuza ukuba ndenze njani. Kula mathuba anaqabe kangaka, kutheni ndisoyika kangaka, kaloku sisi kudala ndikuthanda, yonke le minyaka’
Xa ndibuyela emxholweni, le ngoma ka Ohayv, yenye yengoma othi xa uyimamele ikunike ithemba. Kaloku kule mihla banqabile abafana abakwaziyo ukuthetha namantombazana. Abantu abaninzi namhlanje bathethelwa yimali. Izinto zenziwa lula namhlanje, yaphela lanto yokhe usokoliswe. Ndikhumbula mna, ngelaxesha ndandise lisoka. Xa ndibona intombazana ndandisoyika ndibethelwe luvalo. Kwakunge kuba ndiza kubethwa okanye ndingxolelwe, nto nje, ayenesidima amantombi (andithi awanamhlanje awanaso). Wawuthi nokuba uzincamile , ufike kuye uthethe imbhudede yentshwaqane engavakaliyo, athi ke kwedini wona amagwala azixelele ukuba awayi apho qha azakumqasha (qaja).
Ingoma ezifana nezi ke ziyandonwabisa, ndiyathemba ukuba namantombi amaninzi ayonwaba xa esiva ukuba kusekhona abafana abakwazi ukuthetha kamnandi oluhlobo. Umve umfana xa eyincoma intombaza. Namagama awasebenzisayo akhethwe ngobuchule.
“Kodwa andifuni ukuxhesha ndifuna uyicingisise uyetyise lento ube nokuqiniseka.”
Kaloku umntu onenjongo ngomntu uba nomonde, akangxami tuu, umnika ithuba ukwenzela aqiniseke ukuba nyani nyani naye uyayifuna le nto.
Sayeka nokubhala iileta kaloku, ngoku sithetha embokweni. Ngoko ke ezi ngoma ziyasonwabisa ke thina, ingakumbi indlela ekusetyenziswe ngayo ulwimi.
Ndiyabona wena ukuba nobhulu bancumile kuba kaloku bafundiswa indlela yokuthetha namantombazana.